Momba anay - Yunis International Trading Co, Ltd.
Yunis International Trade (HK) Co, Ltd dia naorina tamin'ny taona 2011. Izy io dia orinasa manana zon'ny entana manafatra sy manondrana izay notohanan'ny Fitantanana ny raharaham-bahiny sy ny fiaraha-miasa ara-toekarena ary ny fitantanana ankapobeny. Ny orinasa dia manana fototra ara-toekarena mafy orina, tambajotra fifandraisana matanjaka ary mpiasa iray feno. Miaraka amin'ny fidiran'i Shina amin'ny WTO dia mitombo ny varotra manafatra sy manondrana. Mba hahafahana mameno bebe kokoa ny filan'ny mpivarotra sy mpanondrana sy mpanondrana entana dia namorona serivisy fananganana varavarana tokana ho an'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao ny orinasanay. Manana rafitra serivisy fanafarana entana sy fanondranana entana any amin'ny tanibe Shina isika. Nanorina ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny orinasam-pitaterana sy sidina maro izahay.
Izahay dia afaka manome ny làlana tsara indrindra sy fandefasana fitaterana an-tserasera ho an'ny firenena mpanondrana entana, ary koa ny famafana sy fividianana. Fiantohana sy serivisy hafa, mandritra ny fotoana mitovy, ny orinasantsika dia manana trano fitehirizam-bokatra feno any Yiwu, mba hanomezana ny filàn'ny entanao ao amin'ny fitaterana an'i Yiwu, azonao atao ny manamarina ny loharanom-barotra, ny fanamafisana entana marobe, misafidy ny fomba fitaterana mety. azo antoka sy fangatahana haingana Hatramin'ny entana.
Ny fanaovana Trade Simpler
Manana tambajotra vaovao momba ny entana momba ny entana isika miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka manerana izao tontolo izao. Eo ambany fitarihan'ny filozofianan'ny raharaham-barotra momba ny "fanatsorana ny varotra" dia nahitantsika valiny mahavariana amin'ny alàlan'ny ezaka ataon'ireo mpiasa rehetra. Ny ekipanay dia manana ekipa misy lamosina manana fahaiza-manao mahay sy ny fahaiza-manao matanjaka. Raha manome vahaolana amin'ny sehatry ny lozisialy ireo mpanjifa dia afaka manokatra ny tsenan'ny sinoa ihany koa ireo mpanjifa any ivelany mba hahitana ny loharanon'ny entana, hanamarina ireo entana ary manambara ny ahiahy rehetra momba ny fanafarana sy ny fanondranana. Manome serivisy matihanina, natao manokana, toetr'andro, rehetra.